कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टर गोरखामा आकस्मिक अवतरण « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टर गोरखामा आकस्मिक अवतरण
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टर गोरखामा आकस्मिक अवतरण गरेको छ ।काठमाडौंबाट पर्वत जाँदै गरेको देउवा चढेको हेलिकप्टर गोरखामा आकस्मिक अवतरण गरिएको हो ।
पालुङटारको आँपपिपल भन्ने स्थानमा हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण गरेको हो । मौसम खराबी भएपछि केहीबेरअघि हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण गरिएको बताइएको छ ।
हमाललाई महानायक नमान्ने राजेन्द्र खड्गीको उद्घोष, भन्छन्, फिल्म नपाउँदा मैले नै खेलाएको हुँ ! (भिडियो)
साँखु – पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन (यही माघ १५गते) हिन्दू धर्मावलम्बीले स्वस्थानी व्रतकथा तथा माधवनारायणको
पत्रकारलाई बोल्न सिकाउने ओलीले फेरि बोले यस्तो अपशब्द !
काठमाडौं ११ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनविरुद्ध बोल्नेहरुलाई देशद्रोहीको आरोप लगाएका छन्
काठमाडौं – पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७ जनाको कोरोनाका कारण ज्या’ न गएको छ ।